Iividiyo ezinconyelweyo-iSiseko soMvuzo- Uthando, isondo kunye ne-Intanethi
Ikhaya Resources IiVideos ezikhuthaziweyo
IiVideos zindlela esheshayo yokufikelela kwisayensi yesiseko malunga neenkohlakalo zokujonga i-intanethi ye-intanethi.
Nazi ezinye esizicebisayo. Azinayo nayiphi na imifanekiso engamanyala.
UMary Sharpe uqala umsebenzi we-The Reward Foundation Impembelelo ye-Internet Pornography kwi-Society (ixesha elifanelekileyo le2: 12)
Ngo-2016 amalungu e-The Reward Foundation athethe kwiNkomfa ye-3 yeHlabathi kwiTekhnoloji yeTekhnoloji e-Istanbul, eTurkey. UDarryl Mead wathetha Ubungozi abaselula abajamelana nabo xa beba ngabasebenzisi bezentombazi (ixesha lokubaleka 12.07). UMary Sharpe wajonga Isicwangciso sokuthintela umlutha we-intanethi kwi-intanethi (ixesha elifanelekileyo le19.47). Igosa lethu loPhando loNhlonipho, uGary Wilson, wathetha ngalo Ukuphelisa ukusetyenziswa kakubi kwe-intanethi ye-intanethi kubonisa iimiphumo (ixesha elifanelekileyo le17.24).
Isayikholojisti yeYunivesithi yaseStanford uPhilip Zimbardo ube nefuthe elikhulu ekucingeni malunga neempembelelo ezenza ukuba amakhwenkwe angaphumeleli esikolweni. Kwi 'Ukuditywa kweeGayUbuza ukuba kutheni ukusebenza kwamakhwenkwe kubonakala ngathi kuyancipha kwihlabathi langoku (ixesha lokubaleka 4:43).
Ngo-2012 uGary Wilson waphendula umceli mngeni kaFilipu Zimbardo 'ngoVavanyo oluBalaseleyo lweZono'. Ibeka ubungqina bokusetyenziswa kakhulu kwe-intanethi njengezinye zezinto ezinokubangela ukwehla ngokubanzi ekusebenzeni kwamakhwenkwe. 'I-Big Porn' sele ibonwa kwiYouTube ngaphezulu kwesigidi se-13.7 samaxesha kwaye iguqulelwe kwiilwimi ezili-18 (ixesha elibalekayo 16:28).
Ubuchopho Bakho kwiSigxina: Yeka indlela i-Intanethi Echaphazela Ngayo Ubomi
Le ntetho yevidiyo ye-2015 yile update kunye nolwandiso lwantlandlolo lwentetho kaTEDx kaGary Wilson (ixesha lokubaleka: 1 hr 10 mins).
I-Porn-Euctivated Erectile Dysfunction
As i-erectile disys function Ngenye yeengxaki ezixhalabisayo kubafana abasha kunye nezibini, kubalulekile ukubukela le ntetho evela kwi-2014 ukuqonda oko kwenzekayo kwingqondo kunye naseziphatheni zobulili xa sithatha izinto ezinokukhuphaza kakhulu. Unokuphiliswa kwiimeko ezininzi kwiinyanga ezininzi xa umsebenzisi eshiya uonobumba kwaye uvumela ingqondo ukuba ibuyele (ixesha elifanelekileyo: 55: 37).
asapSCIENCE ndiyenzile le bhodi yamabali ifikelelekayo. 'Inzululwazi yezoTyhilaIsishwankathelo esicacileyo sendlela kwaye kutheni iphonografi inokuba ngumlutha (ixesha lokubaleka 3: 07).
Ukulinganisa iimiphumo zoonografi
UGary Wilson usithatha ngendlela edibeneyo yoyilo lwemibuzo yophando lwemibuzo inokuvelisa iziphumo ezingenangqiqo kwimiphumo yempilo yokusebenzisa i-intanethi ye-pornography (ixesha elisebenzayo le6: 54).
Ubunjenge-Adolescent Ubushushu beNtanethi
Ukuba unomdla kwiimpawu ezizodwa zobuchopho bomntu omncinci ukusuka kwiminyaka eyi-12 ukuya kwengama-25 kunye nefuthe le-intanethi kwi-Intanethi. le ntetho (ixesha elifanelekileyo: i-33 mins).
Buza i-Neurosurgeon malunga neempembelelo ze-intanethi kwi-Brain
Oku kunzulu Intetho yeTV kunye neurosurgeon uDkt. Donald Hilton ufanelekile ukubukela (ixesha lokusebenza: 22: 20).
Incoko enkulu ye-TEDx ejonge kwisayensi exhasa ubukhoboka be-porn nguDouglas Lisle 'Umgibe Wenjabulo(ixesha lokubaleka 17:10).
Ukwahlukana phakathi kokuzonwabisa kunye novuyo
Kule vidiyo yiYunivesithi yaseCalifornia iTV ebizwa ngokuba "Ukukhwabanisa kwe-American Mind", Ingcali ye-neuro-endocrinologist uRobert H Lustig ucacisa ngamagama alula umahluko phakathi kokonwaba kunye nolonwabo njengomsebenzi wedopamine kunye ne-serotonin kwingqondo. Ijonge kubomi bemihla ngemihla kunye nokutyhala kunye nezinto eziphembelela ezona zinto ziphambili kuthi zibe ngcono okanye zibi. Ishwankathela incwadi yakhe entsha ethi "Ukuqhekeza kweNgqondo yaseMelika: Inzululwazi emva koThatho oluHlanganisiweyo lweeBongo neeMizimba yethu. (Ixesha lokubaleka: 32: 42).
Ngaba ufuna ukwazi malunga nemvume kunye nokwabelana ngesondo? 'Hayi' kuthetha ukuba 'Hayi!' Fumanisa nge 'INdebe yeTe'(ucoceko olucocekileyo, ixesha lokubaleka 2:50).
Ufuna ukubona ngaphezulu?
Indawo entle yokujonga 'yourbrainonporn.com'apho uGary Wilson uqokelele khona iseti efanelekileyo yamakhonkco kwiividiyo eziluncedo ngakumbi malunga nesayensi yeziyobisi ezingamanyala.